अनौठो चलन जेठो सन्तान छोरा जन्मिए गाउँलेलाई हरेक वर्ष खसी ! – Peacepokhara.com
अनौठो चलन जेठो सन्तान छोरा जन्मिए गाउँलेलाई हरेक वर्ष खसी !
बैतडी २६ असोज । सुदुरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बैतडीमा एउटा गाउँमा अनौठो चलन छ । जहाँ जेठो सन्तानकारुपमा छोरा जन्माएका आमाबुवाले हरेक वर्ष तिहारको औँसीको दिन गाउँलेहरुलाई खसी काटेर खुवाउनै पर्छ । यदि त्यसो नगरे छोरालाई अशुभ हुने विश्वास गरिन्छ ।
जिल्लाको मेलौली नगरपालिका– असुरमा आफनो पहिलो छोरा जन्मिदा प्रत्येक वर्ष औंसीको दिन खसी लिने चलन रहिआएको हो । गाउँमा विहेपछि जसको पहिलो सन्तानकारुपमा छोरा जन्मिन्छ त्यसले तिहारको वेला औँसीको दिन खसी दिने चलन छ । दिएको सो खसी गाउँका सबैले बाँडेर खाने प्रचलन रहेको छ ।
परम्परा रोक्न गाउँलेनै पुगे प्रशासन
मेलौली नगरपालिका–९ असुरका स्थानीयले परम्परागतदेखि चल्दै आएको जेठो सन्तान छोरा हुनेहरुले तिहारमा खसी काट्नुपर्ने परम्पराको स्थानीयहरुले नै विरोध गरेका छन् । विगत पाँच पुस्तादेखि चल्दै आएको उक्त पराम्परले समाजिक तथा लैङ्गिक विभेदलाई बढवा दिएको भन्दै केही स्थानीयहरुले बन्द वा परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीयहरुले यो परम्परा बन्द गर्न माग गर्दै आज विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापनपज्ञ समेत बुझाएका छन् । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पत्रकार महासंघ, मेलौली नगरपालिका र अन्तरपार्टी महिला सञ्जाललाई स्थानीयहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । नयाँपत्रिकाले छापेको छ ।
दुई वर्षभित्र ई-पासपोर्ट लागू गर्ने तयारी
निगमकै साँठगाँठमा पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी
peacepokhara 17 Nov 2015
आईजीपी अर्याललाई हटाउन २ एआईजी सक्रिय
peacepokhara 05 Jul 2016